Warshadda Albaabka - Shiinaha Soosaarayaasha Albaabada, Alaab-qeybiyeyaasha
Daaqad aluminium ah oo jajaban
Qoryaha adag ee alwaaxda lagu dubo ee loogu talagalay albaabka fidsan
Zinc iyo Xayndaabka Birta
Xayndaabka ku meel gaarka ah
Waxyaabaha loo yaqaan 'CPL' waa nooc cusub oo ka mid ah maaddada wax lagu duubo ee suuqa ku jirta hadda. Waa nooc ka mid ah melamine si joogto ah wax loo dahaadhay (iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada farsamaynta ee guddiga dabka aan dabka lahayn), taas oo ah khafiif ah sabuuradda dabka aan diiranayn. CPL waxay leedahay cufnaan sare oo dusha sare ah, iska caabin duug ah oo sarreeya, iska caabbinta dabka oo wanaagsan iyo waxqabadka biyuhu ka soo baxaan. Isla mar ahaantaana, dusha sare ee xaashida ayaa laga sameeyaa qaaciddada qaaska ah ee IMPREGNATION processing, sidaa darteed waxay leedahay dabacsanaan dabacsanaan wanaagsan ka dib kuleylka iyo buuxinta buuxinta ka dib qaabeynta. Melamine waa badeecad nus dhammaad ah oo ah CPL.
TY - 2 rinjiyeynta albaabka
Albaabka fidsan ee suuqa wuxuu loola jeedaa albaabka fidsan ee aan lahayn geeddi-socodka qulqulka, kaas oo badanaa loo yaqaan maqaarka warqadda albaabka alwaax adag, oo ka samaysan firiin Shiine ah. Xuddunta albaabku waxaa ka buuxsamay halbeeg adag oo adag. Dusha sare ee warqadda maqaarka alwaax isku dhafan ee alwaax adag ayaa laga sameeyay jilif dabiici ah. Qoto dheer ee jeexdinku waa mid si hoose u yar, maqaarka warqaduna waa ku dayasho maqaarka qoryaha.
1. Noocyo kala duwan oo midab ah, dareen casri ah iyo ciyaar shakhsiyadeed iyo shuruudaha ilaalinta deegaanka ee cagaaran.
2. Dusha sare ee badeecaddu waa mid siman oo dhalaalaya, oo aan lahayn rinji, taas oo ka fogaan karta cawaaqibka xun ee gaaska sunta ah ee ku jira hawada iyo waxyeellada jidhka bini'aadamka ka dib isticmaalka qalabka kale ee qurxinta.
3. Marka la sameeyo, muddada dhismuhu waa gaaban tahay, taasi waa, aqbalida waa lagu raaxeysan karaa riyadiina horay ayaa loo xaqiijin karaa.
4. Waxyaabaha lagu qurxiyo rinjiga bilaashka ah ee lagu horumariyo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad wax soo saar shisheeye oo tayo sare leh iyo alaab ceeriin ah oo tayo sare leh oo la soo dhoofiyo ayaa leh faa'iidooyinka caabbinta saameynta, gubashada aan deg degga ahayn, caddaynta aboor, qoyaan-caddeyn, dayactir wanaagsan, oo aan sun lahayn, aan dhadhan lahayn iyo wasakhda- bilaash ah
5. Dhismuhu waa ku habboon yahay, oo waa la goyn karaa, la jari karaa, la abuuri karaa oo la qali karaa.
6. Marka loo eego aqoonsigaaga, deegaankaaga, shakhsiyaddaada, dhadhanka inaad beddesho qaabab kala duwan oo kala duwan, ayaa ah waxyaabaha ku habboon qurxinta guriga iyo qurxinta gudaha.
TY - 1 rinjiyeynta albaabka
Albaabka 'CPL' ee lakabyada dubista
Albaab midab adag leh
Waxyaabaha aasaasiga ah ee albaabka dubista rinjiga waa loox cufan. Dusha sare waxaa lagu buufiyaa rinjiga dibedda laga keenay (seddex hoose, seddex dhinac, iyo laba nal) siddeed jeer si loo sameeyo geedi socod, taas oo ah, rinjiyeynta ka dib, waa lagu kululeeyaa laguna qalalayaa qolka qalajinta. Gudiga dubida rinjiga waxaa lagu gartaa midab dhalaalaya, tusaalayaal fudud, saameyn muuqaal oo xoogan, aad u qurux badan oo moodada ah, waxqabadka biyuhu aad u fiican yihiin, awooda wasakhda ka hortagga adag iyo nadiifinta fudud. Faa’iido darrada ayaa ah in heerka farsamadu sarreeyo oo heerka diidmada uu sarreeyo, sidaa darteed qiimaha ayaa weli sarreeya; Markaad isticmaaleyso, waa inaan si taxaddar leh u daryeelnaa, xoogaa ka cabsannaa kuuskuusyo iyo xoqitaanno, markii waxyeelloobaan, way adag tahay in la dayactiro oo lagu beddelo guud ahaan; waxay ku habboon tahay dhalinyarada iyo macaamiisha heerka sare leh ee leh shuruudo sare xagga muuqaalka iyo tayada oo ku daba jooga moodada.